တော်ဝင်မိသားစုရဲ့ ချွေးမတွေဖြစ်တဲ့ Lady Diana,Kate Middlton နဲ့ Meghan Markle တို့ဆီကနေ ရုံးတက်ဖက်ရှင်တွေကို အတုယူလိုက်ရအောင်
ဗြိတိန်တော်ဝင်မိသားစုရဲ့ ချွေးမတို့ဆီကနေ Office Lady တို့ ပြန်အတုယူနိုင်မယ့် Fashion များ
19 Aug 2018 . 4:30 PM
တော်ဝင်မိသားစုရဲ့ ဖက်ရှင်ဆိုတာ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ရိုးရှင်းတယ်။တော်ဝင်ဆန်တယ်။ခမ်းနားသလို သေသပ်မှုလည်း ရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့် Lady Diana စလို့ Kate Middleton,Meghan Markle တို့ရဲ့ ဖက်ရှင်တွေဟာ မိန်းကလေးတွေကြားထဲမှာ လိုက်တုပ၀တ်ချင်စရာကောင်းလောက်အောင်ကို ရိုးရှင်းပေမယ့် ဆန်းခဲ့ကြပါတယ်။
အခုပြောပြပေးမှာကတော့ ဒီလိုတော်ဝင်ဆန်ပြီး ရိုးရှင်းတဲ့ သူမတို့ရဲ့ဖက်ရှင်တွေကို Office Lady တွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ် Office Fashion မှာ ဘယ်လိုထပ်ပေါင်းထည့်မလဲဆိုတာပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ ဆိုလိုတာက သူမတို့လို နာမည်ကြီးတံဆိပ်တွေကို ၀တ်ဆင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။တော်ဝင်ချွေးမတို့လို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ကိုယ့်အတွက် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်တဲ့ ဖက်ရှင်ကို ရွေးချယ်ဖို့အတွက် Stylenote လေးတွေကို ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Lady Diana’s outfit
လုပ်ငန်းခွင်မှာ သက်တောင့်သက်သာရှိဖို့အပြင် စမတ်ကျကျ ဖြစ်နေစေဖို့ ရှပ်အင်္ကျီတွေကို အားကိုးလို့ရပါတယ်။ Lady Diana ၀တ်သလို ခပ်ပွပွ ရှပ်အင်္ကျီကို အောက် ဂျင်းဘောင်းဘီလေးတွေနဲ့ တွဲဖက်ဝတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းခွင်အတွက်လည်း အဆင်ပြေသလို ဟိုပေါ်ဒီပေါ်ဖြစ်မှာ ၊နေရတာမှာ မလွတ်လပ်မှာတို့ ဖြစ်မှာ မစိုးရိမ်တော့ဘူးပေါ့။
Meghan Markle’s outfit
Office Lady တွေဆိုတော့ Skirt တွေကလည်း မရှိမဖြစ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ရုံးတက်ရင်း ၀တ်မှာဆိုတော့ စကတ်ကားကား ဖားဖားတွေထက်စာရင် စကတ်အကြပ်လေးတွေက ပိုပြီး သင့်တော်တယ်လေ။ Midi Pencil Skirt လေးတွေက လူကို ပိုသွယ်လျသွားစေသလို ချပ်ချပ်ရပ်ရပ်လည်း ရှိပါတယ်။ အပေါ်က Blouse လေးတွေနဲ့ဆို တကယ်ကို လိုက်ဖက်သလို ရံဖန်ရံခါ အပြောင်းအလဲဖြစ်အောင် T-Shirt လေးတွေနဲ့ပါ တွဲဝတ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
Outfits of Kate Middleton and Meghan Markle
တစ်ခါတလေ Meeting တို့၊ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ အပြင်ထွက်ရမယ့် အခါမျိုးမှာ Dress လေးတွေ ၀တ်သွားလို့ရပါတယ်။ Dress ဆိုပေမယ့် အရမ်းရှုပ်ယှက်ခတ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ နဂိုပင်ကိုယ်ဟန်ကိုလည်း ပေါ်လွင်စေမယ့် ဂါဝန်လေးတွေကို ပိုဦးစားပေးရွေးချယ်တာ သင့်တော်ပါတယ်။ အရောင်ငြိမ်ငြိမ်လေးတွေ၊ ဒီဇိုင်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးတွေ၊ ပွင့်ရိုက်ဆင် နုပ်နုပ်သေးသေးလေးတွေ စသည်ဖြင့် ရွေးချယ်လို့ ရပါတယ်နော်။
The way Lady Diana wore blazers
The way Kate Middleton wore blazers
The way Meghan Markle and Kate Middleton wore blazers
Another way to wear blazers
Office Lady တစ်ယောက်အတွက် မရှိမဖြစ်အထဲမှာ Blazer Coat တွေလည်းပါပါတယ်။ Blazer ရှိခြင်းအားဖြင့် ပုံမှန်ကိုယ်ဝတ်မယ့် ၀တ်စုံပေါ်မှာ ထပ်လိုက်လို့ရသလို Fashionအသားပေး အနေနဲ့ ရှိုးထုတ်လို့လည်း ရပါသေးတယ်။Lady Diana ကအစ Kate Middleton တို့၊ Meghan Markle တို့ပါ Blazer Coat ကို ၀တ်ဆင်ကြတာ တွေ့ရမှာပါ။ Blazer ကို Suit လို တစ်ဆက်တည်း ၀တ်လို့ရသလို ကိုယ်ဝတ်မယ့် ၀တ်စုံရဲ့ အပေါ်ကနေ အပေါ်ထပ်အဖြစ်လည်း ၀တ်နိုင်ပါတယ်။
Lady Diana wore pleated skirts
ဘာဂျာခေါက်တွန့် စကတ်လို့ ခေါ်တဲ့ Pleated Skirt တွေကိုလည်း တစ်ခါတလေ Office Outfit မှာ ထည့်ကြည့်ပါ။ အပေါ်က ဆွယ်တာလေးတွေ၊ တီရှပ်လေးတွေနဲ့ တွဲကြည့်လိုက်ရင် တစ်မျိုးဆန်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
They wore differernt skirts
Midi Skirt တွေပဲ ၀တ်ရတာ တအားပျင်းလာပြီဆိုရင်တော့ မတူညီတဲ့ Skirt ပုံစံလေးတွေကို တစ်ရက်စီ ပြောင်းဝတ်ကြည့်ပါ။ တအားရှည်တဲ့ Maxi Skirt လိုမျိုး၊ အတွန့်အဖွာတွေ သိပ်များတဲ့ Skirt မျိုး၊ တိုလွန်းတာမျိုးတော့ ရှောင်ရပါမယ်နော်။Jean Skirt ၀တ်မယ်ဆိုရင်လည်း အတိုအကားတွေထပ်စာရင် ခြေသလုံးတစ်ဝက်လောက် အရှည်ကိုမှ တစ်ဖြောင့်တည်းသွားတဲ့ ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုပဲ ရွေးပါ။
The way Meghan Markle wore stylepants.
Stylepant တွေကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ အရမ်းစမတ်ကျတဲ့ Office Lady လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ Stylepant တွေက စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။ Shirt အစင်းလေးတွေ၊ ဆွယ်တာအပါး Bodyfit လေးတွေနဲ့ဆို တကယ်ကို လှနေမှာပါ။နမူနာအနေနဲ့ Meghan Markle ကိုပဲ ကြည့်လိုက်ပါ။
ဗွိတိနျတျောဝငျမိသားစုရဲ့ ခြှေးမတို့ဆီကနေ Office Lady တို့ ပွနျအတုယူနိုငျမယျ့ Fashion မြား
တျောဝငျမိသားစုရဲ့ ဖကျရှငျဆိုတာ ကွညျ့လိုကျတာနဲ့ ရိုးရှငျးတယျ။တျောဝငျဆနျတယျ။ခမျးနားသလို သသေပျမှုလညျး ရှိပါတယျ။အထူးသဖွငျ့ Lady Diana စလို့ Kate Middleton,Meghan Markle တို့ရဲ့ ဖကျရှငျတှဟော မိနျးကလေးတှကွေားထဲမှာ လိုကျတုပဝတျခငျြစရာကောငျးလောကျအောငျကို ရိုးရှငျးပမေယျ့ ဆနျးခဲ့ကွပါတယျ။
အခုပွောပွပေးမှာကတော့ ဒီလိုတျောဝငျဆနျပွီး ရိုးရှငျးတဲ့ သူမတို့ရဲ့ဖကျရှငျတှကေို Office Lady တှအေနနေဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ နစေ့ဉျ Office Fashion မှာ ဘယျလိုထပျပေါငျးထညျ့မလဲဆိုတာပါပဲ။ ဒီနရောမှာ ဆိုလိုတာက သူမတို့လို နာမညျကွီးတံဆိပျတှကေို ဝတျဆငျဖို့မဟုတျပါဘူး။တျောဝငျခြှေးမတို့လို ရိုးရိုးရှငျးရှငျးနဲ့ ကိုယျ့အတှကျ သကျတောငျ့သကျသာဖွဈတဲ့ ဖကျရှငျကို ရှေးခယျြဖို့အတှကျ Stylenote လေးတှကေို ပွောပွပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
လုပျငနျးခှငျမှာ သကျတောငျ့သကျသာရှိဖို့အပွငျ စမတျကကြ ဖွဈနစေဖေို့ ရှပျအင်ျကြီတှကေို အားကိုးလို့ရပါတယျ။ Lady Diana ဝတျသလို ခပျပှပှ ရှပျအင်ျကြီကို အောကျ ဂငျြးဘောငျးဘီလေးတှနေဲ့ တှဲဖကျဝတျလိုကျမယျဆိုရငျ လုပျငနျးခှငျအတှကျလညျး အဆငျပွသေလို ဟိုပျေါဒီပျေါဖွဈမှာ ၊နရေတာမှာ မလှတျလပျမှာတို့ ဖွဈမှာ မစိုးရိမျတော့ဘူးပေါ့။
Office Lady တှဆေိုတော့ Skirt တှကေလညျး မရှိမဖွဈပါ။ ဒါပမေယျ့ ရုံးတကျရငျး ဝတျမှာဆိုတော့ စကတျကားကား ဖားဖားတှထေကျစာရငျ စကတျအကွပျလေးတှကေ ပိုပွီး သငျ့တျောတယျလေ။ Midi Pencil Skirt လေးတှကေ လူကို ပိုသှယျလသြှားစသေလို ခပျြခပျြရပျရပျလညျး ရှိပါတယျ။ အပျေါက Blouse လေးတှနေဲ့ဆို တကယျကို လိုကျဖကျသလို ရံဖနျရံခါ အပွောငျးအလဲဖွဈအောငျ T-Shirt လေးတှနေဲ့ပါ တှဲဝတျကွညျ့လို့ ရပါတယျ။
တဈခါတလေ Meeting တို့၊ အလုပျကိစ်စနဲ့ အပွငျထှကျရမယျ့ အခါမြိုးမှာ Dress လေးတှေ ဝတျသှားလို့ရပါတယျ။ Dress ဆိုပမေယျ့ အရမျးရှုပျယှကျခတျနတောမြိုးမဟုတျဘဲ ရိုးရိုးရှငျးရှငျးနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ နဂိုပငျကိုယျဟနျကိုလညျး ပျေါလှငျစမေယျ့ ဂါဝနျလေးတှကေို ပိုဦးစားပေးရှေးခယျြတာ သငျ့တျောပါတယျ။ အရောငျငွိမျငွိမျလေးတှေ၊ ဒီဇိုငျးရိုးရိုးရှငျးရှငျးလေးတှေ၊ ပှငျ့ရိုကျဆငျ နုပျနုပျသေးသေးလေးတှေ စသညျဖွငျ့ ရှေးခယျြလို့ ရပါတယျနျော။
Office Lady တဈယောကျအတှကျ မရှိမဖွဈအထဲမှာ Blazer Coat တှလေညျးပါပါတယျ။ Blazer ရှိခွငျးအားဖွငျ့ ပုံမှနျကိုယျဝတျမယျ့ ဝတျစုံပျေါမှာ ထပျလိုကျလို့ရသလို Fashionအသားပေး အနနေဲ့ ရှိုးထုတျလို့လညျး ရပါသေးတယျ။Lady Diana ကအစ Kate Middleton တို့၊ Meghan Markle တို့ပါ Blazer Coat ကို ဝတျဆငျကွတာ တှရေ့မှာပါ။ Blazer ကို Suit လို တဈဆကျတညျး ဝတျလို့ရသလို ကိုယျဝတျမယျ့ ဝတျစုံရဲ့ အပျေါကနေ အပျေါထပျအဖွဈလညျး ဝတျနိုငျပါတယျ။
ဘာဂြာခေါကျတှနျ့ စကတျလို့ ချေါတဲ့ Pleated Skirt တှကေိုလညျး တဈခါတလေ Office Outfit မှာ ထညျ့ကွညျ့ပါ။ အပျေါက ဆှယျတာလေးတှေ၊ တီရှပျလေးတှနေဲ့ တှဲကွညျ့လိုကျရငျ တဈမြိုးဆနျးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
Midi Skirt တှပေဲ ဝတျရတာ တအားပငျြးလာပွီဆိုရငျတော့ မတူညီတဲ့ Skirt ပုံစံလေးတှကေို တဈရကျစီ ပွောငျးဝတျကွညျ့ပါ။ တအားရှညျတဲ့ Maxi Skirt လိုမြိုး၊ အတှနျ့အဖှာတှေ သိပျမြားတဲ့ Skirt မြိုး၊ တိုလှနျးတာမြိုးတော့ ရှောငျရပါမယျနျော။Jean Skirt ဝတျမယျဆိုရငျလညျး အတိုအကားတှထေပျစာရငျ ခွသေလုံးတဈဝကျလောကျ အရှညျကိုမှ တဈဖွောငျ့တညျးသှားတဲ့ ပုံစံမြိုးလေးတှကေိုပဲ ရှေးပါ။
Stylepant တှကေိုလညျး ထညျ့သှငျးစဉျးစားဖို့ မမပေ့ါနဲ့။ အရမျးစမတျကတြဲ့ Office Lady လေးတဈယောကျဖွဈဖို့ Stylepant တှကေ စှမျးဆောငျနိုငျပါတယျ။ Shirt အစငျးလေးတှေ၊ ဆှယျတာအပါး Bodyfit လေးတှနေဲ့ဆို တကယျကို လှနမှောပါ။နမူနာအနနေဲ့ Meghan Markle ကိုပဲ ကွညျ့လိုကျပါ။